कति सचेत छन् त युवायुवतीहरु ? | चितवन पोष्ट दैनिक
Updated: ७ मंसिर, २०७०
कति सचेत छन् त युवायुवतीहरु ?
७ मंसिर, २०७०
नेपाली हिन्दू संस्कृतिमा विवाहका लागि १२ महिनामध्ये ६ महिना छुट्याइएको छ । हुन त, आजभोलि छुट्याइएका ६ महिनाबाहेक अन्य महिनामा पनि विवाह गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । मुख्यगरी वैशाख, जेठ, असार, मंसिर, माघ र फागुन महिना विवाहको महिना वा लगनको महिनाका रुपमा चिनिन्छन् ।
आजभोलि दसैँेको टीकाको दिनमा र अन्य मह¤वपृूर्ण चाडपर्वका दिन पारेर पनि विवाह–बन्धनमा बाँधिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । खासगरी विदेश गएका र विदेश जाने समय निश्चित भइसकेका व्यक्तिहरुका लागि लगनको महिना कुर्दा ढिला हुने भएकाले अन्य महिनामा राम्रो शुभसाइत हेरेर विवाह गर्ने गरिएको छ ।
भर्खरै लगनको महिना मंंसिर लागेको छ र माघ पनि आउँदै छ । मंसिरमा थुप्रै जोडी विवाह–बन्धनमा बाँधिएर आफ्नो दाम्पत्य जीवनलाई अगाडि बढाउन पुग्छन् । कतिले धुमधामसँग पञ्चै र नौमति बाजा बजाएर त कतिले सामान्य पारिवारिक जमघट गरेर विवाह गर्ने गर्छन् । पछिल्लो समय रोजगारी, आर्थिक सम्पन्नताको अभिलाषा र अन्य थुप्रै कारणले युवायुवती विदेशिने क्रम बढेको छ । विदेशिनेमा युवतीको तुलनामा युवाहरु बढी मात्रामा रहेका छन् । विदेशमा केही समय बसेर छोटो छुट्टीमा घर आएका समयमा विवाह गर्ने र कतिले सँगै लिएर जाने, कतिले केही समयपछि लैजाने र कतिले विवाह गरेर घरमा नै छोडेर जाने गरेका छन् । विवाहका लागि मात्रै पनि छोटो बिदा मिलाएर युवाहरु घर आउने र लगत्तै फर्कने समेत गरेका छन् ।
देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाका कारण पनि स्वदेशमा रोजगारी नपाएर नेपाली युवा ठूलो संख्यामा विदेशिएका छन् । लामो समय परिवारबाट टाढा रहेका युवायुवतीका बारेमा हाम्रो समाज र अभिभावकको धारणा बाह्य वा सतही रुपको मात्र रहेको छ । कुनै पनि अभिभावकले मुख्य गरी छोरीको विवाह गर्न केटाको खोजी गर्ने क्रममा विदेश गएर टन्न पैसा कमाएको केटा खोज्ने गरेका छन् । पैसाले नै सबै सुख दिने मान्यता अभिभावकहरुको देखिन्छ । यस्तै, विवाह गर्ने केटीले पनि विदेश गएको केटा नै रोज्ने परिपाटी देखिन्छ । यसमा दुईवटा कारण छन् । एक त, विदेश गएको केटासँग सम्पत्ति हुन्छ, दोस्रो विदेश जान पाइन्छ । यी दुई कारणले मात्र जीवन सरल हुन्छ भन्ने सोचाइ अभिभावक र अहिलेको युवा पिँढीमा देखिन्छ ।
कुनै घरमा विदेश गएको केटा छोरी माग्न आयो भने केटीको अभिभावकको ध्यान पहिला केटाको आम्दानी अर्थात् विदेशबाट कति रकम घरमा भित्र्यायो, अनि छोरीलाई विदेश लान्छ या लाँदैन ? यी दुवै कुरा आफूअनुकूल भएमा अभिभावक त्यो केटालाई छोरी दिन तयार हुन्छन् । विवाहका समयमा शिरदेखि पाउसम्म पुरिने गरेर सुनका गहना र महँगा तथा आकर्षक लुगा भएपछि केटी पनि मख्ख, त्यसमाथि तत्काल वा केही समयपछि विदेश जान पाइने । ओहो ! आफूलाई विश्वकै सुखी र खुसी व्यक्तिका रुपमा सम्झन पछि पर्दैनन् । तर अहिलेसम्म कुनै पनि अभिभावक वा केटाकेटीले विवाहपूर्वको स्वास्थ्य परीक्षणका बारेमा कुरा उठाएका छन् त ? विवाहअघि एकअर्काको स्वास्थ्य परीक्षणको कुरा उठाउने कसैले आँट गरेका छन् त ?
यसको अर्थ यो होइन कि विदेशिने सबै नराम्रो काममा नै लागेका हुन्छन् । यो कुरा त स्वदेशमा नै रहेका युवायुवतीमा पनि लागू हुन्छ । तर विदेशमा बसेका युवायुवतीमा यो कुरा बढी मात्रामा लागू हुन्छ । विदेशको खुल्ला संस्कृति, विभिन्न देशका विभिन्न संस्कृतिका मानिसहरुको जमघट, परिवारबाट लामो समय टाढा रहनु पर्ने अवस्थालाई आशंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
विवाहका विषयमा अन्य सबै कुरामा विचार गरिए पनि अहिलेसम्म विदेश गएर आएका युवायुवतीको विवाहपूर्वको स्वास्थ्य परीक्षणलाई कत्तिको प्राथमिकतामा राखिएको छ ? अध्ययन नै गर्ने हो भने पनि एक प्रतिशत पनि छैन भन्न सकिन्छ, किनभने हामी नै त्यो समाजका तिनै व्यक्ति हौँ, जसले विवाहपूर्वको स्वास्थ्य परीक्षणलाई आवश्यकता नै हो भन्ने महसुस गर्दैनौँ ।
समय परिवर्तित भैरहेको छ । विश्व परिवेश सूचना, प्रविधि र विज्ञानको विकासले गर्दा साँघुरिँदै गएको छ । शिक्षाको विकासले गर्दा मानिस आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा सचेत हुँदै गए पनि जति सचेत हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकले पनि एचआईभी÷एड्स, हेपाटाइटिसलगायत अन्य कतिपय रोगहरु (जुन यौनसम्पर्कको माध्यमबाट सर्दछ ।) विश्वमा तीव्र रुपमा फैलिरहेको देखाएको छ । देशको सीमा र भूगोलको परिधिले व्यक्तिलाई एउटा देशबाट अर्काे देशमा जान रोक्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विदेशिने युवायुवतीहरु पनि सुरक्षित छन् वा स्वदेशमा रहेका युवायुवती नै सुरक्षित छन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।
कुनै पनि युवायुवतीलाई विवाहपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण गराउन आवश्यक छ । हाम्रो समाजमा रोगको लक्षण देखिएपछि मात्र अस्पताल जाने र परीक्षण गराउने प्रचलन रहेको छ, जसले गर्दा रोगले धेरै नै प्रभाव पारिसकेको हुन्छ । विवाहपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा स्वयम् व्यक्ति, उसको परिवार र भावी दाम्पत्य जीवनका लागि पनि कुनै शंकाको घेरा रहँदैन । आफू, परिवार र भावी जीवनसाथीको पनि मन खुसी हुन्छ, जसले गर्दा जीवनलाई अगाडि बढाउन सहज र सरल हुन्छ ।
विवाहपूर्व युवायुवती कसैले पनि स्वास्थ्य परीक्षणको कुरालाई मात्रै नकारात्मक दृष्टिले हेर्नु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नुजस्तो सावित हुन सक्छ । स्वास्थ्य परीक्षणको कुरालाई चरित्रमाथि औँला उठाएको भन्ने नबुझी सहज र सरल तरिकाले लिँदै केटाकेटी दुवैले स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु आजको आवश्यकता भैसकेको छ । हाम्रो समाजमा यदि कसैले युवायुवतीको स्वास्थ्य परीक्षणको कुरा उठाएमा केटा वा केटीपक्ष रिसाउने हुन् कि ? राम्रो घरको विवाहको कुरा टु्ट्ने हो कि ? भन्ने आशंकाले यस्ता कुरा कसैले पनि उठाउँदैनन् । अभिभावकहरुले यस्ता कुरामा भलै ध्यान नदिऊन्, तपाईं हामीजस्ता युवापुस्ताले आफ्नो जीवनको निर्णय गर्ने समयमा स्वास्थ्य परीक्षणको कुरालाई पनि मह¤व दिएर अगाडि कदम बढाउनुपर्छ । भविष्यमा पछुताउनुभन्दा पहिले नै सचेत हुँदा राम्रो हुन्छ । विवाहपूर्वका सबै कार्यहरु जस्तै, केटाकेटीको स्वास्थ्य परीक्षणलाई पनि एक मह¤वपूर्ण कार्य ठानाँै । रोगको लक्षण देखिएपछि अस्पताल गएर परीक्षण गराएजस्तै विवाहलाई पनि एक लक्षण मान्दै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन जाआँै । यसको सुरूवात गर्न एक जोडी युवायुवतीले आँट गरेमा उनीहरुलाई साथ दिने धेरै जोडी अगाडि आउने छन् । त्यसैले, सुन्दर भविष्य र सुखी दाम्पत्य जीवनका लागि विदेशिनु भएका र स्वदेशमै रहनु भएका युवायुवतीहरुले आफ्नो विवाहपूर्व दुवै सँगै अस्पताल गएर स्वास्थ्य परीक्षण गराऔँ । यस कार्यलाई विवाहपूर्वको एक मह¤वपूर्ण कार्यका रुपमा लिने गरौँ, जसले सुन्दर र सुखी जीवनयापनका लागि मह¤वपूर्ण खुड्किलोको काम गर्नेछ ।
कतिपय परिवार टुट्ने गरेका उदाहरण पनि हामीले देखेका छौँ । कतिपय परिवार भित्रभित्रै गुम्सिएर बसिरहेका छन् । सम्पत्ति र विदेशको सयरमात्र जीवन सुख र खुसी बनाउने माध्यम पक्कै पनि होइन । सबैभन्दा ठूलो कुरा स्वास्थ्य हो । विवाहअघिको स्वास्थ्य परीक्षणलाई हामीले जसरी कुनै प्राथमिकता दिएका छैनौँ, त्यसले पछि परिवार विखण्डनसम्मको अवस्था आउन सक्छ । विवाहपूर्वको स्वास्थ्य परीक्षणबाट हामी डराउनु पर्दैन । त्यसले त पछिका लागि सुखी जीवनयापनका लागि बाटो राम्रो बनाउँछ ।